Kunamata Kunongedzera Kwete Kukundikana Chinangwa | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Kunongedzera Kwete Kukundikana Chinangwa
Nhasi tichave tichishanda nemunamato mapoinzi kwete kukundikana chinangwa. Zvekusikwa kwemunhu wese, pane chinangwa kumashure kwazvo. Mwari akangosika iwe neni munyika ino pasina, Akazviita nechinangwa. Pane dikanwo yekuti isu tizive uye tizadzise icho chinangwa chekuvapo kwedu.
Bhuku ra Genesisi 1:26 Uye Mwari akati, "Ngatiitei munhu nomufananidzo wedu, akafanana nesu; uye ngavave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvipfuwo, napanyika pose." , napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Chikonzero chekutanga nei Mwari akasika munhu ndechekuti ave nekoinonia nemunhu uye kuti munhu ave nesimba pamusoro pezvose zvakasikwa. Izvi zvinoreva kuti, munhu anofanira kuziva chinangwa chekuvapo kwake kuti azadzikise. Zvisinei, nyaya yemunhu wekutanga Adhama yakaguma mune tsaona inoshungurudza mushure mekudonha kwemunhu. Zviripachena kuti zvakaratidzwa kuti Adam aisakwanisa kuzadzisa chinangwa chehupenyu hwake nekuda kwechivi chakapinda muhupenyu hwake kuburikidza nekusateerera.
Murume akasikwa kuti akunde pasi akakundwa nezvivi uye akabva ave muranda wechimwe chinhu chakasikwa. Aifanira kurima ivhu risati ramuberekera michero. Zvakakosha kwazvo kuti tizadzise chinangwa chaMwari chehupenyu hwedu. Kune zviuru zvevanhu vane magumo akasungirirwa kune edu uye kana isu tikatadza kuzadzisa chinangwa, zvakananga kana zvisina kunangana ivo vanokundikanawo. Nemunhu mumwe zvivi zvakaunzwa panyika uye nemunhu mumwe, ruponeso rwakapiwa kumunhu wese. Izvi zvinoreva, tinogona kuve chikonzero chevamwe kubudirira kana kukundikana muhupenyu.
Nzira Shanu dzekuzadzisa Chinangwa
Nyora Chiono Chako
Imwe yedzakanakisa nzira yekuzadzisa chinangwa ndeyekunyora pasi chiono chako. Rangarira mubhuku ra Habhakuki 2: 2 Ipapo Jehovha akandipindura akati, “Nyora chiratidzo ugoita it pachena pamahwendefa, Kuti amhanye anoverenga. Mwari vanonzwisisa kuti danho rekukanganwa muhunhu hwevanhu rakanyanya, ndosaka vakaraira Muporofita Habhakuki kuti anyore chiratidzo pasi, kuti kana achiverenga, amhanye nacho.
Isuwo kuti tizadzise chinangwa, isu tinofanirwa kunyora chiratidzo chehupenyu hwedu. Kuzvinyora pasi hazvireve kuti vanozoshanduka kuita chaiko. Nekudaro, zvinoshanda seyambiro kwatiri kuti timhanye takananga pakuzadzisa izvo zviroto.
Namata Nezve Chiono Chako
Kunamata hakungori chimwe chiitiko chemweya chinoitwa nevaKristu kana vatendi, inzira yehupenyu hwevanhu vanoisa tariro yavo muna Mwari chete. Kunamata inzira mbiri nzira, iwe unotaura naMwari uye unoteerera kune izvo zvaAnoda kutaura. Dzimwe nguva, chiono chehupenyu hwedu chinogona kutaridzika kunge chakajeka, zvinoita sekunge pasina nzira yekuita kuti zviroto uye zvishuwo zviitike. Apa ndipo patinofanira kunamata kuna Mwari.
Kana isu tikanamata nezve chiono chedu, zvinova zvakajeka uye tinowana nyasha dzekugadzirisa izvo zviono.
Iva Akagadzirira Zvipingamupinyi
Murwendo rwehupenyu kunyanya kune hukuru, iwe unofanirwa kusangana nezvipingamupinyi. Kristu akasangana nematambudziko akateedzana, Mupostori Pauro akasanganawo nazvo. Iko hakuna murume akarongedzerwa hukuru uyo ​​asingazosangana nematambudziko kana zvipingaidzo panguva imwechete panguva. Usarega izvo zvinhu zvichikuwisira pasi, pachinzvimbo uzvione sekurudziro yekusamborega.
Kukumbira Mwari rubatsiro kunoreva kuudza Mwari kuti kuda kwake chete kunofanira kuitwa pamusoro pehupenyu hwedu. Dzimwe nguva isu tine zvatinoda, isu tine zvinhu zvatinoshuvira kuve muhupenyu uye isu tinoteedzera zvimwe zvezviroto izvozvo. Nekudaro, nekufamba kwenguva, isu tinoona kuti zvinhu hazvisi kuenda sekuronga futi. Ndiyo nguva yekukumbira rubatsiro kuna baba.
Kunyangwe Kristu Jesu pane imwe nguva akakumbira Mwari kuti kana zvichizomufadza kurega mukombe uyu uchipfuura, Kristu, zvakadaro, akakumbira kuti Kuda kwababa kusimudzwe. Usavimbe nesimba rako rekufa kana mazano ehungwaru kuzadzisa chinangwa muhupenyu, kukudziridza tsika yekukumbira Mwari rubatsiro.
Kuzadzisa chinangwa kuchanetsa pasina kutungamirwa neMweya Mutsvene. Kana chivi chikapinda muhupenyu hwemurume, kuzadzisa magumo kunova kwakaoma zvikuru. Zvichakadaro, zvivi hazvizove nenzvimbo muhupenyu hwemunhu kusvikira murume abva pamberi paMwari. Ichi ndicho chikonzero mukutsvaka kwedu kuzadzisa chinangwa muhupenyu, isu tinofanirwa kunamatira kutungamira kwakasimba kwemweya waMwari.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti nyasha dziwone chinangwa chekuvapo kwangu. Ndinonamata kuti mweya wako mutsvene nesimba zvigone kududzira chinangwa chekuvapo kwangu kwandiri muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinoramba kutadza chinangwa, ndinokumbira nyasha kuti ndirambe ndakatarisa muhupenyu. Ini ndinopesana nemweya wese wekukanganisa munzira yangu yekuzadzisa chinangwa, ndinoparadza mweya yakadaro muzita raJesu
Tenzi, ndinonamatira kuregererwa chero chitadzo muhupenyu hwangu chinozonditadzisa kuzadzisa chinangwa muhupenyu, ishe ndiregererei nhasi muzita raJesu. Nekuda kwekufa kwaKristu, nechikonzero chekumuka kwake, ndinokumbira kuregererwa kwezvivi zvangu muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinokumbira kubatana kwaMwari pakati pangu nevose vaparadzi. Wese murume nemukadzi muhupenyu hwangu izvo zvinozokonzeresa kuti ndikundikane chinangwa, ndinonamata kuti iwe ugotisarudza nhasi muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinosangana nemhando ipi neipi yerufu pamucheto wekubudirira. Ini ndinouya ndakapesana neese marongero uye ajenda yemuvengi kuti andikonzere kutadza chinangwa muhupenyu, ini ndinoparadza zvirongwa zvavo muzita raJesu.
Ishe simukai uye vavengi venyu ngavaparadzirwe. Chero murume kana mukadzi ane chinangwa cheupenyu hwangu hwakaipa kwazvo, ndinokumbira kuti moto wemweya mutsvene uvapise vave madota muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti ndibatsirwe. Ndinokumbira kuti mundibatsire kuzadzisa chinangwa chekuvapo kwangu muzita raJesu. Ini handizokundikana magumo.
Simba rese riri mudzinza rangu rinoshanda richipesana nechinangwa chaMwari chehupenyu hwangu, rinowira kurufu nhasi muzita raJesu. Mhando dzose dzekutukwa kwenyika dzinoshanda dzichipesana neangu ramangwana, kukanzurwa nhasi muzita raJesu.
Ndinoparadza chisungo chose chakaipa muhupenyu hwangu, zvichitadzisa kuratidzwa kwemaropafadzo muhupenyu hwangu, zvibvumirano zvakadaro ngazviparadzwe nhasi muzita raJesu.
Previous nyayaMinyengetero 10 Yekusimbisa Nesimba
inoteveraKunamata Kunongedzera Kurwisa Rufu Pamucheto WeBudiriro
20 minamato yenamato kutuka kutuka kwemadzitateguru